Isimo sezulu sesifuba sisoloko sichaza imimangaliso - ukushisa kwelanga kuthatyathelwe ngokutshatyalaliswa ngokubhoboza umoya kunye nemvula. Kuthekani ukuba iidokethi kunye neebhattshi zeentsuku ezipholileyo zibonakala zibuhlungu? Abaqulunqi banempendulo - i-jersey enobununu boboya. Igcina izinga lokushisa lomzimba, ukhululekile kwaye luncedo. Nangona kunjalo ingaba yinkcazo enomdla kunye nesicatshulwa yomfanekiso kaKazehal. Ngexesha-2016 iChanel inikeza ukukhetha iingubo kunye ne-mini-deuces ezenziwe ngongxube olunqamlekileyo lwesakhiwo "esikhululekile" kunye neempendulo zejometri. U-Emilio Pucci ubonisa iingubo ezimhlophe zeqhwa kunye nezigqoko ezigqithiseleyo, ezihlotshiswe ngamacu, kunye neProenza Schouler iveza intsingiselo yakhe "yokukhangela" - iingubo zokuqala ezivulekileyo ezigqoke ngeengubo eziqhelekileyo.
Imveliso yentsimbi ehlekileyo ayinakuzithoba - ingadibaniswa nee-jeans zedemokhrasi, i-skirt-cases okanye i-jeans enesigxina-esinye isithwaba sale ntwasahlobo. Izinto ezivela kwijezi yomsebenzi ovulekileyo - into ephumelelayo yobunqamle obuninzi idibanisa neenqwelo, izikratshi, iingubo zentambo kunye neefesi.
UChanel: ukusika okuqhelekileyo kunye nentando yenkululeko
Iipucci sweaters kunye nezigqoko zokugqoka - izinto ezisisiseko zengubo yansuku zonke
Iimpawu "ezintle" ezivela kwiProenza Schouler
Iingubo ezibomvu zambatho kunye neengubo zokukhawulela - ukuzingca kweqoqo lohlobo lwe-Rosetta Getty
Iimpawu ezidumileyo zembatho: imbali
Isigqoba esisisiseko somfazi wesimanje
Izinto eziphathekayo kunye nezinto eziphathekayo kweli xesha
Ungayiyeka njani ukukhathazeka ngexesha lokukhulelwa?
Indlela yokujonga umzobo kumnyama: iimfihlo ezintathu ezivela kwiingcali
Izitya ezingumnandi kakhulu zabantwana
Iipatties kunye ne-cottage cheese
Ama-arubini atsiweyo kunye negalikhi
Impawu zokuqala zomntwana ezihambayo